Baidoa Media Center » Beesha caalamka oo sheegtay in beri ay ku egtahay xiliga dowlada KMG Soomaaliya.
China’s 13th escort fleet returns from Somali waters Somali, Amisom Troops Search Houses in Mogadishu Kenya backs return of Somali refugees Somali president calls for investment at London conference War murtiyeedka shirka Soomaalida ee London/Somali conference in London communique SOMALI LINKS
Beesha caalamka oo sheegtay in beri ay ku egtahay xiliga dowlada KMG Soomaaliya.
August 19, 2012 - Written by admin - Edited byadmin Danjireyaasha dowladaha Yurub iyo Mareykanka ufadhiya Soomaliya ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho iyagoo kulan la qaatay mas’uuliyiin ka tirsan qaramada Midoobay waxa ayna sheegeen in maalinta berito ah ay ku egtahay xilka madaxda dowladda Soomaaliya marka laga reebo Madaxweyne Shariif Sheekh Axmed.
Kulan ay maanta ku yeesheen garoonka Aadan Cadde ee magalada Muqdisho danjireyaashaa wadamada Mareykanka, Britain, Talyaaniga Turkiga iyo Augustine Mahega ayaa waxa ay kaga hadleen sida waqtiga loogu talagay ay ugu dhamaan lahaayeen howlaha dowladda si loo soo dhiso dowladda cusub.
Augustine Mahega oo saxaafadda u qabtay shir jaraa’ida ayaa tibaaxay in waqtiga loo qabtay in lagu dhameeyo howlaha u harsan dowladda aan wax waqti ah lagu dareen si loo dhiso dowladda cusub oo ay yeelato Soomaaliya waxa uuna tibaaxay in 20 august ay ku egtahay xilka mas’uuliyiinta dowladda marka laga reebo Madaxweyne Sheekh Shariif kaas oo si KMG ah u haynaya xilka.
Sidoo kale mahiige ayaa intaa ku daray in beesha caalamka ay ka go’antahay sidii ay u dhisilahaayeen dowlad dhameystiran oo ay yeelato dalka Soomaaliya.
Qulqulatooyinkii magaalada Stockholm oo ku baahay magaalooyin dhowr ah. (Sawiro)May 25, 2013
Shirkii madaxda IGAD ee Addis ababa oo isku raacay inay dowlada Soomaaliya hogaanka u qabato arimaha Jubbooyinka. (Sawiro)May 25, 2013
Gabay cusub: Daryeel Shacab by abwaan Galayr. Waa gabay qiira wadaniyad leh.May 25, 2013
DHEGAYSO: IGAD OO SHARCI DARO KU TILMAANTAY SHIRKII KA DHACAY KISMAAYO.May 24, 2013
Ciidamada dalka Siiraliyoon ee AMISOM oo fariisin ka sameystay deegaanka Taabdo.May 24, 2013
Cilmiga Xanaanada Xoolaha Qeybtii 38aad &Hassan Basha Ismael.May 24, 2013
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo u amba baxay Addis ababa.May 23, 2013
Dhegayso: Qiso jecayl oo dhab ah, barnaamishka jecaylka ee Radio Baydhabo.May 23, 2013
Itoobiya oo beenisay inay qayb ka tahay qilaafka ka taagan Kismaayo iyo Jubbooyinka.May 23, 2013
Daawo Sawirada. Dibadbax lagu taageerayay wax qabadka dowlada Soomaaliya lagunasoo dhaweynayay baaqashada mooshinkii ay wadeen xildhibaanada oo Muqdisho ka dhacay.May 23, 2013